အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု - အချိန်ဖြုန်းဖို့အခွင့်အလမ်းတွေများများနှင့်အတူလှပသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်အနားယူ, ကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိတစ်ဦးအလည်အပတ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် စော်ဘွား Fujairah - ယူအေအီးအပန်းဖြေစခန်း၏တဦးတည်း။ သူ၏ပိုင်နက်အများစု၎င်းပြင်ယင်းမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကမ်းခြေမှဆန့်ကြောင်းယင်း၏ပါရှုခင်းများများအတွက်လူသိများသည် တောင်တော်အကွာအဝေး Hajar နှင့်ရိပ်ရတဲ့ထန်းအာရှရပင်။ Excellent ကရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ဆွဲဆောင်မှု destination သည် Fujairah စေ အားလပ်ရက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားဧည့်များအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းအာရပ်ရှိတ်စော်ဘွားများအဘို့မသာ။ အဘယ်အရာကိုဒီစော်ဘွားဒီတော့အထူး?
Fujairah (Fujairah) - အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံများ၌တစ်ခုစော်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။ 1166 စတုရန်းမိုင်စုစုပေါင်းဧရိယာ။ ကီလိုမီတာ။ 2008 ခုနှစ်မှာတရားဝင်သန်းခေါင်စာရင်းအရအဲဒီမှာ 137 940 မြို့သားတို့နထေိုငျနှင့်အရေအတွက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနေသည်။
Fujairah ရှိရာအကြောင်း, ငါတို့ပင်၎င်း၏တည်နေရာအတွက်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်။ ဤ (က East Coast ကိုခေါ်ဘာအတွက်) အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့မှတဆင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေကိုတိုင်တန်းကြောင်းတည်းသောစော်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Fujairah အတွက်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှဝင်ရောက်ခွင့်မပေး။ အာရဗီဟူသောစကားလုံးကို "Fujairah" "အရုဏ်" အဖြစ်ဘာသာကတည်းကနယ်မြေများ၏အလွန်အမည်, ယင်း၏တည်နေရာဆုံးဖြတ်သည်။ ထိုအအမှန်ပင်, မြေပုံအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Fujairah - on နေရောင်ဟာ Emirates ၏ကျန်များအတွက်ထရာအရပ်။
Fujairah ၏စော်ဘွား၏မာနကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ၎င်း၏သဘာဝသယံဇာတသွင်းစဉ်းစားလျက်နှင့်မ: ပင်လယ်အော် 90 ကီလိုမီတာ, ထိုစိမ်းလန်းသောသင်္ဂြိုဟ်တောင်များ, တောငျကိုဉျနှင့်ဓာတ်သတ္တုစမ်း၏ခွမှာပါမြို့တလျှောက်ဆန့်တော်မူသောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကမ်းခြေ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုခရီးသွားဧည့်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဆွဲဆောင်။ မိမိအအားလပ်ရက် မှစ. Fujairah (ယူအေအီး) မှသင်ကအံ့သြဖွယ်ဓါတ်ပုံများနှင့်အမှတ်တရများဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
Fujairah ၏မြို့ - စကားမစပ်ကြောင့်အလားတူအမည်နှင့်ယင်းစော်ဘွား၏မြို့တော်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာမိုးမျှော်တိုက်များနှင့်ကြီးမားသောစက်ရုံများအဘယ်သူမျှမဖြစ်ကြပေမယ့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်။ အဆိုပါမြို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်နှင့်သန္တာကျောက်တန်းများ၏ရေအောက်ကမ္ဘာ၏ဂုဏ်အသရေ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှထူးခြားသောအဆွဲဆောင်။ snorkeling နှင့် scuba ရေငုပ် Fujairah မှခရီးသွားနှင့်မလူကြိုက်များအဲဂုတ္တုပြည်မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. ပရိတ်သတ်များ။
Fujairah အပေါငျးတို့သစော်ဘွား၏အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ 1901 ခုနှစ်တွင်သူ Sharjah ၏စော်ဘွားထံမှနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်ဖက်ဒရေးရှင်းသာ 02/12/1971 Fujairah Al-Sharqi ၏ရှိတ်စော်ဘွားမျိုး၏အုပျခြုပျဝင်ကြ၏။
ယင်းစော်ဘွားရဲ့စီးပွားရေး၏အခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ငါးဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Fujairah အတွက်ဒေသခံများအလုပ်မလုပ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆိပ်ကမ်းအဖြစ်လတ်ဆတ်သောငါးနှင့်ပင်လယ်စာရှိပါတယ်။
Fujairah တစ်ဦးနွေးသမခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုကိုကလွှမ်းမိုး။ မိုးရွာရွာတာရှည်ဘို့ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအကြားအဓိကအားကျရောက်, ပြီးတော့မ, ဒီမှာလုပ်နိုင်နီးပါးတစ်နှစ်ပတ်လုံး Vacationing ။ အဆိုပါပူနွေးလအတွင်း, Mid-နွေဦးကနေနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆောင်းဦးရာသီမှစတင်ကာပျမ်းမျှနေ့စဉ်အပူချိန် + 35ᴼS (ကအရမ်းပူရက်ပေါင်းနှင့် + 40ᴼSလည်းရှိပါတယ်) ဖြစ်ပါသည်။ ရေ ... +25 မှတက် + 27ᴼSပူနွေးလာသည်။ နှင့်နိုဝင်ဘာလမှဧပြီလရန်နှင့်နေ့ကိုအလွန်အဆင်ပြေ: ပျမ်းမျှ + 26 ... + 27ᴼS။ ပင်လယ်ရေ + 20ᴼSဖြစ်ပါတယ်။
Fujairah ၏ကျန်များအတွက် - လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဟိုတယ်များ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၌တည်၏။ ဒါဟာအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့၏အမြင်များနှင့်အတူစူပါအစုံမှ Deluxe ကနေအခန်းငှားဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်ဖြစ်နိုင်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိကြောင်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ Fujairah, ကလေးများနှင့်အတူအံ့သြစရာများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအားလပ်ရက်များတွင်: တစ်ဦးချင်းစီဟိုတယ်အတွက်သင့်လျော်သောဝန်ထမ်းများရှိပါတယ်, တစ်သားသမီးရဲ့အခန်းတစ်ခန်းဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းတစ်ခုကလပ်အဖြစ်အားကစားနှင့်ဂိမ်းများပွင့်လင်းသောဒေသများတွင်လည်းမရှိ။
သာ 20 ခန့်၏စော်ဘွားအတွက်ဟိုတယ်,5*4* အများစုအဖွဲ့အစည်းများ, သင်မူကား * နေရာထိုင်ခင်း options နဲ့ဘတ်ဂျက်3ရှာဖွေ2နိုင်ပါတယ်။ * သငျသညျ Fujairah အတွက်အထုပ်ခရီးစဉ်ကိုဝယ်လျှင်, အစားအစာများ၏ပြဿနာကိုသင်ပေါ်လာပါဘူး။ "အားလုံးပါဝင်နိုင်" ၌အသကျရှငျနဲ့ပထမဦးဆုံးလိုင်းပေါ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိသည်၏ဇိမ်ခံ, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်လူကြိုက်များဟိုတယ်များ Fujairah ကမ်းလှမ်းမှုကို။ Fujairah အတွက်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်အနက်ခရီးသွားဧည့်များ၏အမြင်တွင်ထိုကဲ့သို့သောရှိတဲ့ Radisson Blu Resort ကို Fujairah တော်ဝင်ကမ်းခြေအဖြစ်ဟိုတယ်, Fujairah Rotana Resort ကို, သမုဒ္ဒရာ, ဟီလ်တန် Fujairah နှင့်အခြားသူများပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့ Fujairah အတွက်အစားအစာစျေးနှုန်းများအပေါ်အကြောင်းပြောဆိုလျှင်, သူတို့သည်အနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အများကြီးပိုအဆင်ပြေစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုလုံလုံလောက်လောက်ဖွံ့ဖြိုးမဟုတ်သည်ကို ထောက်. , သုံးအစားအစာများတစ်ရက်လည်းပါဝင်သည်သောခရီးစဉ်, ယူ။ ပြည်တွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကူညီနေတဲ့ menu ကိုဥရောပ, မြေထဲပင်လယ်, တရုတ်နှင့်သင်တန်း Arabic အဘိဓါန်အစားအစာများ၏ဟင်းလျာများပေးထားပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးစားသောက်ဆိုင်စားသောက်ဆိုင် al-Mishuan, Hadramout, အယ်လ်ဖုတ်နှင့်Caféမာရီယာဖြစ်ကြသည်။
Fujairah (အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု) တွင်ကြည့်ရှုပါ & Do
ဤသည်စော်ဘွားလှပသောသဘာဝနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကမ်းခြေသာကျော်ကြားသည်။ Fujairah က၎င်း၏သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများအတွက်ကြွယ်ဝသောဖြစ်တယ်, ပထမဦးဆုံးဌာန၌ကဒီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်:
ယူအေအီးအတွက်အသက်အကြီးဆုံးဗလီ အယ်လ် Badia5လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တညျဆောကျခဲ့သည့်,
တောင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ခံတပ် Batinah ခံတပ်,
ဥယျာဉ် Sain Al-Madhab;
အယ်လ် Hale ကဟောင်းနန်းတော်-ခံတပ်။
Fujairah အတွက် Entertainment ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားနေသောခေါင်းစဉ်:
နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းနှားတိုကျပှဲအရှိဆုံးအံ့မခန်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုဖျော်ဖြေရေးဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ အဆိုပါအစဉ်အလာပျေါတူဂီ၏အချိန်ထဲကနေကြာခဲ့သည်။ နွားတင်းပါးနှင့်စက်ဝိုင်းကျော်လွန်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွန်းသေဆုံးသို့မဟုတ်ချို့တဲ့အဘယ်သူမျှမသည်ရှိ၏,
ရေငုပ် Fujairah အတွက်ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးတိုးပွားလာဆွဲဆောင်: ရေအောက်ကမ္ဘာကတောက်ပပြီးအလွန်ကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိ၏
Safari က သဲကန္တာရပေါ် Fujairah ၏။
Fujairah ခုနှစ်တွင်4ကြီးမားသောစျေးဝယ်စင်တာဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကခရီးသွားကုမ္ပဏီများ, ဆိတ်ကွယ်ရာပုံမှန်အတိုင်းထံမှ ခရီးစဉ် Fujairah နှင့်ယူအေအီး၏, အများဆုံးဖက်ရှင်ဆိုင်များနှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်များအပေါ်အလွန်အထူးစျေးဝယ်ခရီးစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Fujairah အတွက်စျေးဝယ်၏ပရိသတ်များခရီးသွားဧည့်များသောအားဖြင့်အဖိုးတန်သတ္ထုများအမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုဝယ်ဖို့ဘယ်မှာသောကြာနေ့ရဲ့ဈေးကွက်အတွက်အပေးအယူလုပ်ညှိနှိုင်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်း၏ဘုန်းအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ဖို့အကြံပြု ရေတံခွန်အယ်လ် Vurraya , ဥယျာဉ် Ain အယ်လ် Madhab ပေါ်တွင် go လေ့လာရေးခရီး ကိုတောင်ပေါ်သို့မဟုတ်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တလျှောက်။ စျေးကွက်များနှင့်စျေးဆိုင်များတွင် Fujairah အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်မှဆုကြေးဇူးကိုနှင့်ချစ်ရသူအဖြစ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယျသို့ရှာပါ။
အခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကို Fujairah နှင့်လွတ်လပ်စွာတွေ့နိုင်ပါသည်အားလုံးပါပဲ။
ဖော်ပြချက် Fujairah အပန်းဖြေကမ်းခြေများ
Fujairah အတွက်အင်္ဂါရပ်များအားလပ်ရက်ဒီမှာအမူအကျင့်တို့သည်စည်ကားမြို့တော်နှင့်တက်ကြွသောဘဝကိုငြီးငွေ့ကလူစွန့်ခွာရန်ပိုနှစ်သက်နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အထီးထီးနေခြင်း၌ဖြုန်းချင်သောထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကမရှိတော့ပင်လယ်ကို Fujairah ၏ကမ်းခြေ washes အဘယ်အရာကိုဒါအရေးကြီးလှသည်။ နေရောင်ခဲ့သောအဓိကအရာ, ကမ်းခြေနှင့်တိတ်ဆိတ်။
အမ်းမရိတ်မဟုတ်ဘဲအားလုံးကမ်းခြေပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကမ်းရိုးတန်းကဏ္ဍများကိုခွဲခြားသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကငှားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဟိုတယ်များနှင့်ရေပန်းခြံများဝယ်ယူခဲ့သည်။ သဲနှင့်ကျောက်တောင်နှစ်ခုလုံး, Fujairah နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကမ်းခြေများတွင်ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤအမှု၌, ကမ်းခြေပေါ်နီးပါးမျှအခြေခံအဆောက်အအုံလည်းမရှိ။ တစ်ဦးကကမ်းခြေကိုထီးနှင့် sunbeds မဆိုအမှုငှားရမ်းခံရဖို့ရှိသည်။
Fujairah သဲကမ်းခြေအကြောင်း, ဝါရင့်ခရီးသွားများအတွက်ကွာမြို့ရဲ့ဆိပ်ကမ်းကနေရေကူးဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအနီးအနားရှိရေနံပလက်ဖောင်းရှိသည်။ ကောင်းစွာထူထောင်၏အပန်းဖြေဒေသများများထဲတွင် Korfakkan , Badia အယ်လ် Aqah သဲသောင်ပြင်, သဲသောင်ပြင်စန္ဒီသဲသောင်ပြင်, Dibba ၏ရွာ ။
ရေကူး, ဒီမှာငုပ်အဲဂုတ္တုပြည်၌ထက်အများကြီးပိုမိုလုံခြုံပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ Fujairah ရေငုပ်သမား၏ကမ်းလွန် blacktip ကျောက်တန်းငါးမန်းကြုံတွေ့ရ။ သူတို့အထူးမာရ်နတ်ကြသည်မဟုတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကလူသားတွေကိုအန္တရာယ်မရှိကြပေ။ ငါးမန်းငါးနှင့်လိပ်များ၏မြောက်မြားစွာ Shoal ၏ကမ်းခြေတလျှောက်တွင်ရေကူး။
အရက် Fujairah အတွက်အရက်အဖျော်ယမကာလုပ်နယ်မြေပြင်ပရှိ, ဟိုတယ်တွင်စားသောက်ဆိုင်၌ရောင်းတားမြစ်သည်။ ဒါဟာမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်သည်ကိုထိုအခါသတိရနှင့်အခြားလူရဲ့ဥပဒေများနှင့်အသက်တာ၏လမ်းကိုလေးစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, အခါ Fujairah နှင့်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုမှကြွလာ Sharjah , ထူးခြား Fujairah ၏စော်ဘွား။ အဆိုပါ Sharjah ရှာရီယာဥပဒအလွန်တင်းကြပ်စွာပြဌာန်းနှင့်အရက်ကိုပင်ဟိုတယ်များအတွက်တားမြစ်ထားသည်။
Fujairah ခရီးသွားများအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ဒါဟာယေဘုယျ၏ကမ်းခြေပေါ်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနေပူထဲနှင့်ရေကူးဖို့ကိုလက်ခံသည်မဟုတ်။ တခြားနေရာတွေမှာပါကအကောင့်ထဲသို့အဝတ်ရဲ့အရှည်, အ neckline ၏အတိမ်အနက်ကို, နှင့်အင်္ကျီလက်များ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်အရှည်ယူရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာ disparagingly ဒေသခံရည်ညွှန်းသောသူခရီးသွားဧည့်များကဲ့သို့မဟုတျပါဘူး ဥပဒေများကို ။
Fujairah ၏မြို့တော်အဖြစ်ယူအေအီးရှိမဆိုစော်ဘွားအတွက် လေဆိပ် ။ ဒါဟာအကြောင်းကို3ကီလိုမီတာတောင်ဘက်မြို့လယ်၏တည်ရှိပြီး 1987 ခုနှစ်ကတည်းက running နှင့်စော်ဘွား၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတမ်းပေါ်တွင်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်တင်ယာဉ်အသွားအလာများအပြင်, ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပျံသန်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးနှင့်လည်းပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြာပါသည်။
အဓိကလေဆိပ်များနှင့်မြို့ကို ဒူဘိုင်း၏ Fujairah ကနေခရီးဝေးဘတ်စ်ကားသွားပါ။ ထိုကဲ့သို့သော, မြို့ပြအဖြစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဤအရပ်၌မရှိ, ခရီးသွားဧည့်အများအားဖြင့်တစ်ဦးတက္ကစီကိုအသုံးပြုဖို့: ဝန်ဆောင်မှုချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်။ နိုင်ငံတော်ကထိန်းချုပ်ထားသောန်ဆောင်မှုများကုန်ကျစရိတ်နှင့်, cheat ကီလိုမီတာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ စျေးနေရာတိုင်း fixed ။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို ကားတစ်စီးငှားရမ်း၏ Fujairah အတွက်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါသည်: သင်သည်မည်သည့်လူတန်းစား (အကြီးစားအမျိုးမျိုး) ၏ကားငှားလို့ရပါတယ်။ ဒါကအားလုံးယူအေအီးသွားရောက်အဖြစ်မြို့တော်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်သောအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်မလိုဘဲသင်အခွင့်အလမ်းပေးသော အဘူဒါဘီ ဒူဘိုင်း - နှင့်ယူအေအီး၏အကြီးဆုံးမြို့။ အဆိုပါလမ်းများချောမွေ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဥရောပနှင့် CIS နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဓာတ်ဆီအများကြီးစျေးသက်သာသည်။
Fujairah (ယူအေအီး) တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လေဆိပ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, တကကုန်တင် terminal ကိုအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ် Chartered လက်ခံရရှိရန်။ ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ပိုင်နက်တွင်ဒီကနေမျှတိုက်ရိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်သာဥရောပမှတဆင့်ချိတ်ဆက်မှုသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူရှိ၏။ ဒါဟာအမြဲမြန်ဆန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။
Fujairah မှဒူဘိုင်းကနေအကွာအဝေး 128 ကီလိုမီတာ (စက်ပေါ် 1.5 နာရီ) ကတည်းကအများဆုံးခရီးသွားများအတွက်ကဒူဘိုင်းအတွက် fit ပါစေ။ မည်သည့်ယူအေအီးလေဆိပ်ကနေသင့်ရဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုလွန်းစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤဝန်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ခဲ့သလျှင်, သင်ဒေသခံတစ်ဦးတက္ကစီဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ကနေ 5:00 pm တွင်ထံမှအပေါငျးတို့သစော်ဘွားဖို့ 24:00 ဖို့နဲ့ပုံမှန်ဘတ်စ်ကားများရှိပါသည်။
ဒါ့အပြင်တန်ဖိုးရှိ Shadzhe အတွက်လေဆိပ်လေကြောင်း-Arabiya မှဆိုက်ရောက်၏ထို option စဉ်းစားပါ။ Fujairah 113 ကီလိုမီတာမှ Sharjah ကနေအကွာအဝေးကြောင့်တက္ကစီများက 1 နာရီများအတွက်ကျော်လွှားဖြစ်ပါတယ်။
နာတာလီ Portman ၏သမီး Amalia ပြသနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်
အပြည့်အဝ 2014 နွေရာသီဖက်ရှင်
အပြည့်အဝ 2015 နွေရာသီဆင်မြန်း၏စတိုင်များ
မှတ်ပုံတင်ရန် - ညဥ့်မှာပင့်ကူကိုတွေ့မြင်
ပန်းပွင့်ပျားရည် - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Carmen Electra
ဆံပင်ပုံစံတွေ Nina Dobrev
မိုးလုံလေလုံအပင်များတွင် Mote ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရ - အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်း